सामाजिक मीडिया एक संकट व्यवस्थापन उपकरण को रूप मा Martech Zone
बुधबार, जुन 12, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हामी हाम्रो समय भन्दा अगाडि थिए! करीव years बर्ष पहिले, मैले एडम सानोको साथ साझेदारी गरें र हामी वर्डप्रेसको साथ एक मजा टेक्स्ट अलर्ट एकीकरण बनायौं। हाम्रो आशा छ कि स management्कट व्यवस्थापन मान्छेहरूले यसलाई किन्नेछ र यसको प्रयोग गर्नेछ ... अलर्ट पोस्ट गर्दै र मानिसहरूलाई उनीहरूको जानकारी बाहिर निकाल्न WordPress मा बनेको कमांड सेन्टरमा फर्किदै। Years बर्ष पछि र यो जस्तो देखिन्छ कि संकट व्यवस्थापनले अब अन्ततः सोशल मिडिया अपनाउँदैछ शब्दलाई बाहिर निकाल्न!
सकेसम्म चाँडो व्यापक श्रोतासम्म पुग्न सरकारी एजेन्सीहरू, नाफारहित संस्था, कर्पोरेसनहरू र अन्यहरू सामाजिक व्यवस्थापनको लागि स crisis्कट व्यवस्थापनको लागि हेरिरहेका छन्।
वास्तवमै यो सन्तुलित, विचारशीलको कदर गर्नुहोस् आपातकालीन प्रबंधन डिग्री साइट बाट इन्फोग्राफिक यसले कसरी सामाजिक मिडियालाई स management्कट ब्यबश्थापन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा दिशा र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
टैग: निगमहरूसंकटसंकट व्यवस्थापनसरकारी एजेन्सीहरूगैर-लाभकारीहरू
कल-टु-एक्शन बिना सामग्री रूपान्तरण हुँदैन